Ugbu a dị gam akporo 11 maka Galaxy S10 | Gam akporosis
A gam akporo 11 dị maka Galaxy S10
Dị ka a na-atụ anya ya, njedebe mbụ nke onye nrụpụta Korea Samsung nke ahụ emelitere na nke kachasị ọhụrụ nke gam akporo dịGam akporo 11 bụ Galaxy S20 nsochi ya bụ ihe ngosi nke 20, Galaxy S20 FE na Galaxy Z Flip. Ugbu a, ọ bụ oge nke ọnụahịa ndị dị ogologo n'ahịa.
Ka izu na-aga kemgbe ụlọ ọrụ Korea nke Samsung kwupụtara ụzọ maka mmelite na gam akporo 11 na One UI 3.0, obere obere ngwaọrụ nke a na-emelite na-abawanye. Ngwaọrụ kachasị ịmalite ịmalite ịnweta gam akporo 11 bụ Galaxy S10.
Mmelite a amalitela na Switzerland, n'ihi ya, ọ bụ okwu nke awa (na ntakịrị chioma), mana ụbọchị, ruo mgbe ọ ruru mba ndị ọzọ ebe Samsung azụ ahịa a. Mmelite a dị maka nso nso nke Galaxy S10: S10e, S10, S10 + na S10 5G na-agụnye nche patch maka ọnwa nke Jenụwarị 2021.
Ngụkọta nke mmelite a nwere ike ịdị iche, mana ọ dị na 1.8 GB, yabụ ọ bụrụ na ị dị mkpụmkpụ nke ohere na ekwentị gị, ị kwesịrị ịmalite nhicha ka ị nwee ike ịwụnye ngwa ngwa ọ dị.
Mgbe ọ bụla anyị nwere ohere imelite ngwaọrụ mkpanaka anyị na ụdị sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, a na-atụ aro ya mee nkwado zuru ezu nke ọdịnaya niile echekwara na ngwaọrụ anyị, nke mere na, ọ bụrụ na ọdịda ada n'oge usoro a, anyị anaghị efunahụ ozi anyị echekwara kpamkpam na anyị nwere ike weghachite ya ozugbo nsogbu nke ngwaọrụ ahụ gosipụtara.
Usoro nkwalite ahụ adighi ada ada.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » A gam akporo 11 dị maka Galaxy S10
Redmi 7A amalitela ịnata MIUI 12 mmelite
Etu ị ga - esi dobe ọnọdụ “Edozina” iji rụọ ọrụ na deactivate na akpaghị aka